जहाँ युवतीको मोबाइल नम्बर छानी छानी खरिद, बिक्री हुन्छ ! - inaruwaonline.com
जहाँ युवतीको मोबाइल नम्बर छानी छानी खरिद, बिक्री हुन्छ !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २७, २०७३ समय: ६:५३:१८
एजेन्सी। तपाईं कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ युवतीको मोबाइल नम्बर छानी छानी खरिद, बिक्री हुन्छ भन्दा ? पत्याउनु पनि कसरी, युवतीको मोबाइल नम्बर पाएर के गर्ने ? किन खरिद गर्ने, बेच्नेले पनि किन बेच्ने ? भन्ने लाग्ला । तर यस्तो ठाउँ छ जहाँ युवतीको मोबाइल नम्बर भटाभट खरिद, बिक्री हुन्छ ।
त्यो पनि सुन्दरता र शालिनता हेरेर फरक फरक मूल्यमा । राम्री युवतीको मोबाइल नम्बर धेरै मूल्यमा र अलि कम राम्रीको कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ । यस्तो विचित्रको ठाउँ हो भारतको उत्तर प्रदेश जहाँ खुलेआम रुपमा युवतीको मोबाइल नम्बर खरिद, बिक्री हुने गरेको छ ।
मोबाइल रिचार्ज गर्ने ठाउँबाट यसरी युवतीको मोबाइल नम्बर बिक्री भइरहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । पसलमा मोबाइल रिचार्ज गर्न आउने युवतीको नम्बर टिप्दै राख्ने र तिनै पसलेले राम्री युवतीको नम्बरलाई बढी मूल्यमा गाउँका युवाहरुलाई बेच्ने गरेको पाइएको हो । युवाहरु पनि राम्री युवतीलाई मिस्डकल गर्न, मायाजालमा पार्न र दुःख दिन यसरी मोबाइल नम्बर किन्न लालायित हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
भारतीय एक पत्रिकाकाअनुसार महिला पुलिस हेल्पलाईनमा आएको उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । हेल्पलाइनमा १५ नोभेम्बर २०१२ देखि ३१ डिसेम्बर २०१६ बीचमा कुल ६ लाख ६१ हजार १ सय २९ वटा उजरी परेका थिए । जसमध्ये ५ लाख ८२ हजार ८ सय ५४ वटा उजुरी भने मोबाइल नम्बर र टेलिफोनमा मिस्डकल गरेर हैरान पारेका नै थिए ।